Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Arabia Saodita » Arabia Saodita dia voamarina ho firenena mpiara-miasa ofisialin'ny ITB India 2021 » Page 2
Amin'ny maha firenena mpiara-miasa ofisialin'ny ITB India, Ny Fahefana misahana ny fizahan-tany Saodiana dia haneho andiam-panolorana fizahan-tany ankehitriny sy hevi-dehibe momba ny fizahan-tany ary koa ireo fivoarana vaovao mahavariana eo amin'ny faran'ny. Indostrialy stratejika ny fizahantany amin'ny ho avin'ny Saudi Arabia ary ny firenena no mpamatsy vola lehibe indrindra manerantany amin'ny foto-drafitr'asa fizahan-tany maharitra sy fanomezana. Ny tetikasa toa ny Ranomasina Mena sy Amaala dia mametraka fenitra vaovao manerantany amin'ny fampandrosoana sy fitantanana ny fizahantany mifanaraka amin'ny tontolo voajanahary. Ary tranokala vaovao toa an'i AlUla sy Diriyah no manome mpitsidika fahitana tsy mbola voadinika momba ny tantara ara-kolontsaina manankarena ao Arabia.
"Saudi Arabia dia manolotra traikefa miavaka amin'ny mpandeha karana, miorina amin'ny fandraisam-bahiny Saodiana ary manome alalana ny mistery arabo," hoy i Fahd Hamidaddin. “Ny fiarahamiasa aminay amin'ny ITB India dia ampahany lehibe amin'ny tanjonay maharitra mba hirotsahana, hanome aingam-panahy, hanasana ary hampifaly ireo mpandeha Indiana any Saudi Arabia.”
Ny mpanatrika ITB India dia hanana fotoana hitsidihana ny trano fampirantiana nomerika an'ny Saudi Tourism Authority ary handamina fivoriana iray miaraka amin'ireo solontenan'ny STA hahafantarana bebe kokoa ny toerana halehany.